Sein Lyan - စိ န် လျှံ: နောင် အနှစ် (၂၀) ကြာသော်...
Writer Sein Lyan Time 11:55 pm
စိန် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မိဘကို အသက်ထက်ဆုံးထိ လုပ်ကျွေးနိုင်ပါစေ
ကျမ်းမာ၍ ချမ်းသာပျော်ရွင်သော ဘဝကို အဓိပါယ်ရှိရှိ အကျိုးရှိရှိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သောကိုဖိုး
ခေါင်းက ဘာလို့ ဒီလောက်ကိုက်နေတာလဲ။
ကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲ အဓိကဦးစားပေးနေကြတဲ့ လူ့သဘာဝကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ....
အများအကျိုးကို မျှမျှတတကြည့်တတ် မြင်တတ်တဲ့ ဖိုးစိန်...
စိန်တွေစီမနေရလဲ ဝမ်းမနဲပါနဲ့ သူငယ်ချင်း...
အခုအချိန်မှာ ငါတို့သေရမယ်ဆိုရင်တောင် အကြွေးရှင်းရှင်း အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့
ညိရေ.. ဓာတ်ပုံရိုက်သွားရမှာမို့ ပြန်လာမှ သေချာ ပြန်ဖတ်မယ်။ ဗေဒင်ကို စိတ်မစွဲနေနဲ့။ ယတြာ ရှိတယ်။ ယူမလား။ :-P
နာလဲ ချိတ်ညစ်ယာဘီ။ ဘယ်တော့များမှ ပထမရမှာပါလိမ့်။ နေဦး နာ အိပ်မက်မက်လိုက်ဦးမယ်။ တိလား မြူး။ အဟိ။
(အဖော်တွေ့ပြီပေါ့..)နောက်အနှစ် ၂၀ ထိဆေးမတွေ့
ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။အားမငယ်ပါနဲ့။ အကြားအမြင် ဆရာမတစ်ယောက်ကတော့ပြောတယ် အဲဒါ ဝဋ်နာကံနာ
သေချာတာက ကိုယ်လည်းနောက်အနှစ် ၂၀ထိအသက် ရှည်ပါ့မလားဆိုတာလေးတွေးပြီး တရားတွေကိုလည်း ယူသွားပါတယ်။
30 May 2009 at 03:49
“ဘကြီးအိုအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ အုံး နောင်နှစ်ခါ
တန်ဆောင်မုန်း ပွဲကြည့်ပါအုံး” သီချင်းလေးကို သတိရ
သွားပါတရ် အဟဲ။ ဘကြီး ရာ ခေါင်းကိုက်တာလောက်နဲ့ 
ဘကြီးရဲ့ အဖေ ဒသန လေးကို သဘောကျတယ်။ တကယ် မှတ်သွားတယ်ဗျ။ ဘကြီးတို့ လို့့အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့သူတွေက ရှေ့ မှာ ပိတ်ရပ်မထားနဲ့ နော်။။နောက်မှာ ရှိတဲ့ သူတွေက ကျော်ရခက်တယ်ဗျ။။။။မြန်မြန်ဆောင်ဗျို့ ။။ဒါမှ ဘခါးကုန်း သားစားတုန်း မဖြစ်မှာ။။။။
30 May 2009 at 03:50
ဖတ်ရင်းနဲ့ မောသွားတယ်ဗျို့ 
နောင် အနှစ် ၂၀ မပြောနဲ့ 
မနက်ဖြန် ဆိုတာ ရှိမလား
ဘယ်လို လဲ ဆိုတာ မသေချာတဲ့
လူ့ ဘ၀ ကြီး ပါပဲ ။
ကို စိန့်အဖေ ရဲ့ဆုံးမ စာ လေးကလည်း
တကယ့်ကို စံထား အတုယူဖွယ်ပါပဲ။
ဗေဒင်တွေ ဘာတွေ လည်း သိပ်ပြီးအယူမသီး
အသက်၃၅ နှစ် မှသေ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ိပို့ စ် ရေးနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ လဲ
ဗြုန်းခနဲ လဲပြီး သေသွားနိုင်တာပဲ ( ဟဲဟဲ ခင်လို့ စတာပါ )
ကို စိန် နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကို
အဖေနဲ့ အမေ ကို လုပ်ကျွေးပြုစုရင်း
ကွေးသောလက် မဆန့် မီ
ဆန့် သောလက် မကွေးမီ
လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာ ကောင်းကျိုး
သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ လို့ 
အ ဘ ခါးကုန်း သားစားတုန်း ။
(ဒီအဘိုးကြီး ဘာ အသားစားသတုန်း)
ခြေပြတ် လက်ပြတ်။ခေါင်းပြတ် (အဲ ..ခေါင်းကိုက်)
အလိုလေး ဦးဖိုးစိန် ရယ် ။
သေပါနဲ့ အုံးကွယ် ...
ဝံကြီး တနေရာပေးထားပါတယ် ။
ဒေါ်ကြီးအယ် နဲ့ နေရာလဲ လို့ လည်း ရပါတယ် ။
အင်း..မကြီိးလဲတွေးနေတာ.. ဖိုးစိန်လေးကတော့ ခေါင်း
ချေခိုင်းသလို ခန္တာဆက်တာတို့ ၊ဘာတို့ လုပ်ဆိုတော့
မေမေတို့ကလုပ်ပေးကြတာပေါ့... စိတ်ထဲမှာ သိတ်အမှတ်မထားခဲ့ပဲ..ဦးဥာဏ်က ဘုရား၊တရားကို
အစ်မထက်ပိုးပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တော့ အခု အသက် ၃၉ ထဲရောက်လာပါပြီ... အေးဆေးပါ..
အနှစ် ၂၀မှာ မိသားစုလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်
အစ်မတို့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဝမ်း
မကွဲကြပဲ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် ဆက်သွယ်ကြပြီး
တစ်နှစ်တစ်ခါလောက် တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နိုင်ကြရအောင် စိတ်
ကူးထဲမှာ စီစဉ်ထားပါတယ်နော်...း)))) အဲလောက်သံ
ကိုဖိုးစိန်ရေ.. အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မြော်မြင်မှုတွေကို လေးစားတယ်ဗျာ.. ဘာပဲပြောပြောအဲလို ဘ၀ကို ကြိုတွေးတဲ့သူတွေ တကယ်ကိုရှားပါတယ်ဗျာ.. တကယ်ကိုလေးစားသွားပြီ...
30 May 2009 at 06:18
ကိုဖိုးစိန်ရေ.. ညက မူးတူးတူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားလို့အခုမနက်မှ လာ မန့် ရတယ်။ ဆောရီးဗျာ...။
"ဘယ်တော့သေမယ်၊ ဂေါက်ခနဲ သေနိုင်တယ် .." အဲဒီ သေခြင်း၊သေမျိုးတွေ မေ့လိုက်ဗျာ။
နံပါတ် (၁)က ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်နေထိုင်မယ်..။ လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပစ်မယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ ဘေး ပြေးတွေ့ ပစ်မယ်။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ထားမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အနှစ် ၂၀ ဆိုတာ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားကြမှာပါဗျာ။ အဲဒီကျမှ မဟေသီလဲရ၊ ကလေးတွေလဲ တပြုံတမကြီးနဲ့"ကိုဖိုးစိန်ရေ .." အိမ်ရှေ့ က လှမ်းအော်လိုက်ရင် ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ကြီး(စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ နေရလွန်းလို့ လေ) သာ ထွက်မလာနဲ့ ...။ :P
ကိုဖိုးစိန် Father ကြီး ဆုံးမစကားတွေက မှတ်သားစရာတွေချည်းပါပဲ။ အခုလို (( သေခါနီးကြီး )) အဲလေ ကျွန်တော့် tag ကို ရေးပေးတဲ့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Swimming is the best medicine migriane......just try if u dun believe.....Jasmine
ခေါင်းကိုက်တာဆရာဝန်မပြကြည့်ဘူးလား ...သေချာပြပြီးကုလေ... မှတ်သားစရာများမှတ်သားသွားပါတယ် .... ကိုယ်ရောစိတ်ပါအမြဲကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ...ကိုဖိုးစိန်ကိုချစ်သောမဒီကညာအမြန်တွေ့ပါစေ...အေးချမ်း ပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရပါစေ
အားလုံးက Positive Thinking တွေဆိုတော့ Negative ဘက်ကရေးမယ်...အချိန်ကုန်ခံပြီး Block တွေရေးနေ မယ့် အစား အယ်ဒီ Idea ကို အခြေခံပြီ တိကျတဲ့Strategic/ Plan တခုဆွဲသင့်တယ်... e.g. ခုဘာလုပ်နေတယ်။ ခန့် မှန်းပြီဆုံးချိ်န်...ရလာမယ် Benefit...ဒါမှ မဟုတ် ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ...ဒါဆိုခုဘာလုပ် သင့်လဲ...(so called "backward planning") ....Stop Dreaming...မကျေနပ်သူများ စာရေးသူ ကိုပဲ အပြစ်တင်ပါ ခင်ဗျာ...သူအတင်းရေးခိုင်းလို Comment ရေးရ တာပါခင်ဗျာ...ဟီးဟီးဟီး...:-D
မောင်လေးအဖေ ဆိုပြခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်က တကယ်ကို မှတ်သားစရာပါပဲ။ နောင်အနှစ် (၂၀)မှာ မျှော်လင့်ထားသလို အားလုံးလက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ မောင်လေး ဖိုးစိန်ရေ...
တွေးစရာတွေ အများကြီးပါတဲ့ post ပါ။
ဖိုးစိန် ဖေဖေ ဆိုပြခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်လေးကြောင့် ပြောခဲ့သူကိုရော ပြန်ရေးပေးတဲ့သူကိုပါ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
လူကျန်းမာ နေရင် ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပေ့ါဗျာ.....။
အဓိကက ကျန်းမာရေး ကိုဂရုစိုက်ပေ့ါ အကိုရာ.......
နောက်ကိစ္စကတော့နောက်ပေ့ါ .. အခုလောလောဆယ် ကျန်းမာအောင်သာနေ....
မင်းလေးေ၇းတဲ့post ၂ခုအတွက် တခါတည်းမန့် တယ်လို့ မထင်နဲ့ နော် အေ၇းကြီးတာတွေပြောမယ် ခေါင်းကိုက်တာကအကြောင်းအမျိုး၂ရှိတယ် စိတ်ဖိစီးမှု တွေများတဲ့ အခါ ဆန္ဒတွေစောနေတဲ့ အခါဒါလေးတွေကယေဘူယသဘောတွေ ကျန်တာတွေကတကယ့် ကို အများကြီး ရောဂါအနေနဲ့ ဆို မကြီးဝါ ပြောသလို ဓါတ် မှန်ရိုက်ကြည့်ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမှာပြဒါတွေလုပ်ရတယ်အကိုလည်းအရင်တုံးကဒီလိုဘဲနေ့ တိုင်းခေါင်း ကိုက်တယ် ဆေးရုံသွားပြတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် လို့အဖြေထွက်တယ် ဒါနဲ့ စိတ်သက်သာအောင်တရားမှတ် တာခုဆိုပြောက်သလောက်ရှိသွားပြီ နောက်တခုပြော မင်္ယ မင်းလေးရဲ့ စာတွေဖတ်၇တာအားငယ်နေတဲ့့အမူရာတွေ့ နေ၇တာအကိုတကယ်စိတ်မကောင်းဘူး တကယ်ဆိုမင်းတို့ အရွယ်တွေမှာအမြဲတန်းတတ်ကြွမှု တွေနဲ့ အနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်ဘို့ အသင့် ဖြစ်နေ၇မယ်လေ ခုကာလတွေမှာမိဘကိုလုပ်ကြွေးသမှုပြုနေတယ်ဆိုတာသတိထားသင့် တယ် ဒီလိုအားငယ်စိတ်တွေနဲ့ ပင်ပန်း ကြီးစွာငါတို့ ကိုကျေးဇူးဆပ်နေတာလို့ သူတိုသိသွားရင် အသဲနှလုံးတွေပွင့်ထွက်သွားအောင်တဆတ်ဆတ်နာကြ လိမ့် မယ်စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာဖြစ်လိမ့် မယ်အော်ငါတိုသား သူ့ ခမျာဒီလိုခံစားနေရပါလားလို့ တွေးပြီးယူကြု့းံမရဖြစ် မယ် မိဘကိုကျေးဇူးဆပ်တာဟာ ကြွေးဟောင်းဆပ်တာသားသမီးကိုပြုစုစောင့် ရှောက်တာ က တော့ ကြွေး သစ်ချတာလို့ ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့် မို့အဲဒီကြွေးတွေ
အတွက်မင်းကအမြဲတတ်ကြွရွှင်လန်းနေဘိူ့ လိုပါတယ် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ္မာချမ်းသာနိုင်ပါစေညီလေး အကိုရဲ မင်းအတွက်ထားရှိတဲမေတ္တာကြောင့် မင်းခံစားနေရသောဝေဒနာများအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်ပါစေ့ ချစ်ခင်မှုများစွာဖြင့်အကို သုဒြေ္န
ခေါင်းကိုက်သက်သာတဲ့ ဆေးနည်းကို ပုံမှန် လုပ်ပေး။
ဘ၀မှာ ငွေကြေးချမ်းသာဖို့ထက် ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာဖို့လဲ လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတ ညီသိတယ်ဟုတ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဘ၀တလျှောက်လုံး သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေမောင်လေးရယ်...
တို့လဲ ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တယ်..ပါရာစီတမော့ သောက်တယ်..ပြီးရင် ပန်ကာရှေ့မှာ ခေါင်းကို ၁နာ၇ီလောက်စိုက် ထားလိုက်တာပဲ...ခေါင်းကိုက်ရင် အစားအသောက်ပါ ပျက်တယ်..life insurance လေးလုပ်ထားတယ်မဟုတ်လား..တို့လဲ လုပ်ထားတယ်..သိပ်လဲ စိတ်အပင်ပန်းမခံပါနဲ့.
အဖေခါးကုန်း သားစားတုန်း မဖြစ်ရအောင်...
၁) ကော်ဖီခါးခါးထဲကို သံပုရာရည် ထည့်သောက်ကြည့်ပါ.
၂) သံပုရာသီးကို ရေနွေးပူစိမ်ပြီး သောက်ကြည့်ပါ.
(အဝင်ဆိုးလို့ orange juice original နဲ့ ရောသောက်ပါ)
၃) တရုတ်လက်ဖက်ခြောက် ကြိုက်ရင် သောက်ပါ.
၄) centrum performance ကို တနေ့ တလုံး မှန်မှန်သောက်ကြည့်ပါ..
အဲဒါတွေထဲက တနည်းမပျောက် တနည်းပြောင်း လုပ်ကြည့်ပါ.. အဲဒါမှ မပျောက်ရင် ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးသောက်ပြီး အိပ်လိုက်ပါ..
နောက်ဆုံးမရရင်တော့ ခေါင်းအသစ်တလုံးလဲလိုက်ပါ.. အဟိ.. ဘဝတူမို့ အကြံပေးတာပါ...
ကိုကိုစိန့် အဖေ ရွတ်ပြတဲ့ သြ၀ါဒလေးက မှတ်သားစရာကောင်းလိုက်တာ...
ကိုကိုစိန့် စိတ်ကူးလေးလည်း ကောင်းပါ့...
နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့ လွယ်သူ့ ကတော့ ညီယောက်ဖလေးဖြစ်ပါတယ် ချစ်ကိုယောက်ဖဖိုးစိန်ရေ
အကိုညီကိုလည်း နောက်မကျအောင်လေ ညီမနဲ့ အမြန်ပေးစားတော့နော် သိလား ပြီးတော့အကိုဆီမှာ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ လိုက်နာဖို့ လာခံယူပါ့မယ်
အကိုတစ်ခွက် ညီတစ်ခွက် တန်းတူပေါ့နော်
ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုလို့သေတမ်းစာကိုအမြန်ရေးပေးပါ
ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုတာ သိတော့ ညကသောက်တာကြောင့် များလားလို့ စဉ်းစားနေတာ
အကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝလေးကို ညီဘေးကနေပြီး တတ်သလောက်ဖြည့်ပေးမယ်လေ
အကို မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ မိဘလိုအင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အောင်မြင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ..
ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိရင် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့ ..
အားတင်းထားဗျို့ .. ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်း)